Sam Allardyce oo loo magacaabi doono tababaraha England - BBC News Somali
Sam Allardyce oo loo magacaabi doono tababaraha England
Lahaanshaha sawirka z
Image caption Allardyce ayaa badali doono Roy Hodgson
Tababaraha kooxda kubadda cagta Sunderland, Sam Allardyce, ayaa lagu wadaa in loo magacaabo tababaraha cusub ee xulka Ingiriiska - iyadoo 24-ka saac ee soo socdana la filayo in la xaqiijiyaba.
61-jirkan ayaa waxa uu badeli doonaa tababarihii hore ee Ingiriiska Roy Hodgson, kaasi oo iscisalay kaddib guuldarradii layaabka laheyd ee ay kooxda kala kulantay xulka Iceland tartankii Qaramada Yurub ee Euro 2016 ee xagaagan lagu qabtay dalka Faransiiska.
Allardyce, oo horay usoo tababaray kooxaha West Ham, Newcastle iyo Bolton, ayaa todobaadkii la soo dhaafay wadahadal la yeeshay Xiriirka Kubadda Cagta ee Ingiriiska ee FAda iyadoo sidaana uu kaga adkaaday ninkii la tartamayay ee Steve Bruce oo haatan tababara kooxda Hull City.
Sunderland iyo Hull-ba waxa ay FA-da ka codsadeen in howsha dadajiyaan, maadaama horyaalka Ingiriiska ay ka harsan tahay wax ka yar muddo bil ah.
Allardyce ayaa xilka tababaraha xulka Ingiriiska loo imtixaanay kaddib markii uu 2006-dii Ciyaarihii Adduunka kaddib xilkaasi banneeyay Sven-Goran Eriksson hasayeeshee waxaa xilka loo magacaabay Steve McClaren.
Ciyaartiisa ugu horreysa ee adag ee uu tababare u yahay Ingiriiska ayaa waxa uu 4-ta bisha Sebteembar kaga hortegi doonaa xulka Slovakia, ciyaartaasina waxa ay ka mid tahay isreebreebka Koobka Adduunka.